Anakao Toliara: norarana tsy hanjono ireo sambo sinoa | NewsMada
Anakao Toliara: norarana tsy hanjono ireo sambo sinoa
Maherin’ny 1.500.000 ny Malagasy mivelona amin’ny fanjonoana madinika manerana ny Nosy. Mitsinjo azy ireo ny fanjakana ary miezaka miaro ny tombontsoany sy ny fihariany.
Nampitaraina ny rehetra, indrindra ireo mpanjono madinika malagasy, ny nahita ireo sambo lehibe miisa enina, an’ny Sinoa, manjono any amin’ny fari-dranomasin’Anakao, Toliara tato anatin’ny herinandro maro farany teo. Tonga tany amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ny fitarainana sy ny vaovao, ka nitondra fanazavana sy nandray fepetra. Nambaran’ity minisitera ity àry, fa nomen’ny fanjakana teo aloha alalana ny orinasa sinoa Mapro Sud, nanomboka ny taona 2016 ary nifarana ny desambra 2018 teo.
Mbola nanohy ihany
Nanohy ny fitrandrahana sy ny fanjonoana ihany anefa izy ireo taty aoriana ary nomen’ny Maep taratasy fampiatoana, ny 19 febroary 2019. Tsy nanaraka izany izy ireo fa mbola nanohy ihany. Nandray fepetra indray ny minisitera, ny 12 marsa teo, nanome taratasy ny tompon’andraikitry ny Mapro Sud, mandidy ny hampiatoana ireo sambony sy hiantsona any amin’ny seranan’i Toliara. Nodidiana koa ireo tantsambo sinoa rehetra hiakatra an-tanety. Voalaza fa sazy henjana no miandry io orinasa io raha toa ka tsy manaraka izany ary manohy ny fanjonoany sy ny fitrandrahany.
Manamafy ny tale jeneralin’ny Jono sy ny harena anaty rano ao amin’ny Maep, Rtoa Rasoamahenina Fara Esther, fa vonona tanteraka ity minisitera ity handray azy ireny amin’ny alalan’ny sampandraharaham-paritra isan-toerana ary tsy tokony hatahotra izy ireo raha misy mahita toe-javatra tsy ara-dalàna miantraika amin’ny fiainan’ny vahoaka madinika,. Manome toky ny Maep fa miaro sy hiaro ny mpanjono madinika malagasy.